Booliska Moosanbiik oo Baadigoob ugu jira Dadka Qasha Ragga Bidaarta leh – Radio Daljir
Juunyo 8, 2017 5:02 b 0
Booliska Moosanbiik (Mozambique) ayaa u digay ragga bidaarta leh in ay bartilmaameed u yihiin weeraro lagu qasho. Boolisku waxa ay sheegeen in saddex nin oo bidaar leh lagu dilay dhawaan degmada dhexe ee Milange, mid ka mid ahna lagala baxay xubnaha jirkiisa.
Saraakiisha booliska ayaa waxa ay sheegeen in ragga bidaarta leh ay dileen dad aaminsan in madaxooda yahay dahab ama dahab lagu heli karo. Laba qof oo falkan looga shakisan yahay ayaa la xiray oo labaduba ay dhalinyaro yihiin.
Dhanka kalena, ciidanka boolisku waxa ay sheegeen in jirka ragga bidaarta leh loo isticmaalo xafladaha sixirka lana rumaysanyahay in lagu helo hanti badan.